wax Nano - Changzhou longxin Makiinado Co., Ltd
qalabka Nano yihiin qalabka in ay leeyihiin ugu yaraan hal aragti (0.1-100 nm) bannaan ee saddex dhinac-cabbir ah ama ka sameysan yihiin iyaga ka mid ah sida unugyada aasaasiga ah, kuwaas oo u dhigmata qiyaas ahaan le'eg oo ka mid ah 10 ~ 100 atamka si wadajir diyaarin.
Waxaa loo qaybin karaa afar qaybood: budo Nano, fiber Nano, film Nano oo block Nano. Waqtiga horumarka budo Nano waa dheer iyo technology waa ugu waaweyn, taas oo ku salaysan kale saddex nooc oo ah wax soo saarka. cilmi baaris ku saabsan aragtida ah ee aasaasiga ah ee nanotechnology iyo diyaarinta qalabkan cusub ayaa si degdeg ah u horumarsan, oo lagu ballaaran loo isticmaalo qalabka dhaqanka, qalabka caafimaadka, qalabka elektarooniga ah, blaastiigga iyo warshadaha kale.
Talinaynaa qalabka wax soo saarka alaabta wax Nano: ES / DS superfine sax ah saddex dhagax duuban, taxane DYS Haydarooliga dhagax saddex duuban, Taxanaha WSP Fast Flow kuusha Mill, taxane WST turbo dhagax ciid Nano
line Product: Nano line wax soo saarka darane qoyan